Maxaa ka sooobaxay Shirkii Deegaanka XaarXaar Ku qabsoomay?
Wednesday September 15, 2010 - 21:03:42
Kulan weyn oo aad loo soo agaasimay ayaa waxaa uu kadhacay magaalada xaarxaar taariikhdu marka ay aheyd 12 September, kulan ay soo qabanqaabiyeen aqoonyaho & wax garad ka tirsan beesha yuusuf daarood ayaa waxaa ka soo qeeybgalay wufuud kakala socoto gobolada Puntland gaar ahaan Magaalada Bosaso Garoowe Galkacyo & burtinle. Waxaa ka mid ahaa wuufuudaas Ugaaska Cumer Geel Suldaan Mohamed ahmed abdulle & dhamaan nabadoonada beesha Yd.
Waxaa la dhihi karaa waxaa uu ahaa kulan taariikhi ah oo looga hadlay barnaamijo baddan ku saabsan xagga hormarka oo ay ogu horeeyo waxbarashada, caafimaad & amaanka.
Waxaa kulanka furay Ugaaska oo hadal aad u qiimo adan ka jeediayay amaana usoo jeediyay qabanqaabiyaasha shirka, ku tilamaayay kulada noocan oo kal ah in labadiyo waxaa kaloo ugaaska ad ogu deeraaday midnimada ^ hormarka, waxaa kaloo u cadeeyay in uu marwalba diyaar u yahay in beesha ay hormar gaarto dadaalna uu ku bixin doono.
Waxaa kaloo uu ku soo dhaweyay suldaanka oo isagana halkaa ka jeediyay kalmado dhirigalin oo ku saabsan hormarka, waxaa kaloo sheegay issimida beesha in ay marwalba in ay marwalba ay lagarab taaganyihiin hiil & hoowba.
Waxaa halkaa ka hadlay Eng C/xamiid Jaamac yare oo ahaa uqaabilsanihii barnaamijkii Schoolka xaarxaar & howshiisa halka ay mareeyo isagoo sheegay in iskuulka uu furmay hoowshiisa ay meel fiican mareeyso loona baahanyahay in halkaa laga sii wado
Waxaa halkaa ka hadlay aqoonyahano Nabadoono & Siyaasiyiin ay ka mid yihiin waziirka cusman cawad iyo Xildhibaanka Axmed jaamac,abdulle gaabo oo dhamaantood kawada baahida loo qabo in deegaanka xaarxaar la hormariyo.
Gabagabdii ayaa waxaa la isku afgartay in loo daayo xogheyta shirka in ay soo diyaariyaanka qoraalkii & tala bixintii kadibna loo gudbo sameeyn laba gudii oo kala ah Guddiga hormarinta waxbrashda & guddiga hormarinta Bulshada.
Shirkii Todobaadlaha Ahaa Ee Wasiirada Puntland Oo Lagu Ansixiyay Miisaaniyadda Dowlada Sanadkaan
Maxaad ka Xasuusataa Qaraxii Masiibada Ahaa Ee 14-Octobar Ka Dhacay Isgoska Zoobe Magaalada Muqdisho
Shirkii Wadatashiga Qaran Oo Qodobo Iyo Habraacyo Ay Ka Soo Bexeen
Shirkii Wada Tashiga Qaran Ee Muqdisho Oo Maalintii Labaad Galay
Shirkii Todobaadlaha Ahaa Ee Golaha Wasiirada Oo Looga Hadlay Amniga Iyo Talaalka Covid 19 (SAWIRRO)